Apple na-ekwe ka eriri transformer nke ghọrọ nkwado | Esi m mac
Ebe ọ bụ na mbụ nnukwu mmelite nke watchOS, nke ngwaọrụ anyị na-aghọ elekere abalị na-egosi oge mgbe anyị na-akwụ ụgwọ ya, ọtụtụ bụ ndị ọrụ kpebiri ịzụta nkwụnye inwe ike ịgba ụgwọ Apple Watch dị mfe na enweghị ihe egwu ịda. Nchaji Apple Watch na-enweghị nkwado bụ ọrụ ị ga-eji, n'ihi na n'ozuzu ya, eriri na-agagharị karịa chickpea na ọnụ nna nna anyị.
Emeela patent ọhụrụ nke Apple debara aha na United States Patent na Trademark Office ka ọha na eze mara nke anyị nwere ike ịhụ eriri, ụdị Milanese nke na-enye anyị ohere ịme ọtụtụ ihe. karịa nanị ijiri ngwaọrụ ahụ n'aka anyị. Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo nke na-ebute isiokwu a, otu n'ime ọrụ eriri a nwere bụ ohere ịnweta nkwado, ka anyị nwee ike idowe ya na tebụl dị ka a ga-asị na ọ bụ elekere nkịtị, n'agbanyeghị na ọ bụkwaghị buru nke ukwuu.
Uzo ozo di iche nke anyi n’ahu n’ime onyonyo di n’okpuru bu ike nke ike kpuchie ngwaọrụ niile ka ọ bụrụ na anyị chọrọ idobe Apple Watch N’akpa anyị, anyị nwere ike were eriri ya kee ya ka anyị nwee ike ichekwa ya oge niile, ọ bụrụgodị na ọ dabara na ọ ga-ada n’ala.
Ojiji ọzọ enwere ike, dịka akwụkwọ ikike Apple si kwuo, bụ idowe ya na ihuenyo nke MacBook anyị, nke a ga-ejikọ ya na magnets, mana maka nke a, anyị ga-azụta njikọta nke otu ahụ, ebe ọ bụ na MacBook bụ nke aluminom, ihe na-abụghị nke na-anaghị eme ka ihe ndọta ghara ịgbaso. N'oge a bụ naanị eriri bara uru n'ezie nke m ga-azụta.
Kedu ihe ị chere gbasara eriri eriri ọkụ a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple na-eme ka eriri ihe ntụgharị nke ghọrọ ihe nkwụnye
Asịrị banyere Apple si zụta Time Warner